Mayelana NATHI - Wuwei Hailun New Material Technology Co., Ltd.
Mayelana neWuwei Hailun
I-Wuwei Hailun New Material Technology Co., Ltd. yasungulwa ngo-Ephreli 2013. Iyisisekelo sokukhiqiza esitshalwe yiJiashan Hailun Fine Chemical Plant. Kutholakala eTumen Industrial Zone yaseGulang County esifundazweni saseGansu, kunendawo ephakeme nezindawo ezikhangayo, neHexi Corridor, ihlane le-tengger eliseduze. Kuyisikhungo sezokuxhumana seSilk Road.
Imikhiqizo yethu eyinhloko i-aminoguanidine bicarbonate, i-aminoguanidinium sulphate, i-Aminoguanidine Hydrochloride namanye amakhemikhali amahle, angabalamuli ababalulekile kodayi, ezokwelapha, izibulala-zinambuzane, uketshezi lwekristalu namakha amakha. Njengamanje, sinempahla engaguquki ye-RMB 10 million Yuan. Ukumboza indawo ka-15,000 square metres, inkampani yethu inabasebenzi abangu-50 njengamanje.
Ngaphezu kwalokho, inkampani yethu yethula amasu athuthukile nemishini yokwenza ukukhiqiza. Sisebenza ukukhiqizwa ngokuqinile ngokuya nge-ISO9000 standard standard. Okwamanje, kunohlelo oluphelele lokuhlola ikhwalithi ukuqinisekisa amakhasimende abanzi ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme. Imikhiqizo yethu ithunyelwe eNingizimu-mpumalanga ye-Asia, eYurophu naseMelika.
Le nkampani inesizinda sokukhiqiza amakhemikhali esiqiwini epaki lezimboni laseTumen Town, eGulang County, esifundazweni saseGansu.
Umgomo wethu ngukuthi: shintshanisa ukwethembana kwakho nokusekelwa ngenkonzo nangobuqotho, ukuzuza ngokuhlanganyela, ukudala ukuwina ndawonye.
Mayelana noJiaxing Dongliang
I-Jiaxing Dongliang Pharmaceutical Technology Co., Ltd.yigatsha lethu, yasungulwa ngonyaka we-2013. Iyinkampani yokuhweba yakwamanye amazwe esebenza ngokuhweba nokuthekelisa. Yenza ukuhweba kwasekhaya nakwamanye amazwe, ukusebenzisana kwamazwe angaphandle kweSino, ukukhiqizwa kokubambisana, ukuhweba kwe-entrepot namanye amabhizinisi.
Ikakhulu benza ukungenisa nokuthekelisa izinto ezahlukahlukene zamakhemikhali, izinhlaka zepulasitiki, odayi nezinsizakusebenza, izingulube kanye nabaphakathi, imikhiqizo yenjoloba, i-hardware nemishini kagesi, izimpahla zehhovisi, izindwangu zenaliti, izinto zokwakha, imikhiqizo kagesi, izingubo, izicathulo nezigqoko futhi neminye imikhiqizo.